OMN GRD: Seenaarraa maal baranna? Prof Mohammed Hassen fi Prof Abbas Gnamo -
OMN GRD: Seenaarraa maal baranna? Prof Mohammed Hassen fi Prof Abbas Gnamo
Duula Wallaggaa fi Olola DHARA Mootummaa Naannoo Amaaraa
Via Hundee Lammii , Amajjii 12, 2020
Mootummaan Naannoo Amaaraa fi Mootummaan Amaaara kan Federaalaa erga loltootni WBOtti dhiheenya kana Wallaggatti duulchifaman Humna Poolisii (Addaa) Amaaraa ta’uun ragaa Waraqaa Eenyummaa harkaa booji’ameen saaxilamee as naasuu guddaa keessa seenanii waan ibsan waliin dhahaa jiru.
Gaafa loltoota karaa Asoosaa bobbaasanii karaa Begii fi Gidaamii lolaaf mootummaan Naannoo Amaaara bobbaasee lola deemsisu kanatu saaxilama jedhanii yaadanii hin beekani. Keessattuu erga “LOLLI WALLAGGATTI DEEMAA JIRU LOLA Amaaaraa fi Oromoo Giddutti jedhamee Oromootni saaxilanii Mootummaan Naannoo amaaraa fi Mootummaan Federaalaa Amaaraa kan Masaraa jiru naasuu guddaadhaan waliin dhahuu jalqaban.
lola dhimma Oromoo fi Oromiyaa keessa galuun WBO irratti deemsisan seeraa fi Heeraa alaa aguuguuf sababa okkolaa seeraa fi heeraan fudhatama hin qabne qabaaxxaran. “Ijoolleen Amhaaraa University Dambidollootti waan butamaniif waraana bobbaafne” jedhanii soban. Waan irratti hin qophaa’iniifis lakkoofsa bartoota Amhaaraa butamanii waliin dhahaa Bakka buutotni Mootummaa Naannoo Amaaraa fi Activistootni fi Nigusuu Xilaahun, nafxanyicha Abiy Amhadiin mari’atee odeeffannoo ibsa laatu waan waliin dhahamaa ibsa kennan.
Yeroo dhugaan isaa qoratamu University Dambidollootti Amhaara dhiisii Dabtariin tokko illee akka hin butamne bulchaan universitichaa fi gaafatamaan tikaa Oromiyaa ibsa kennani.
Kana irraa kan hubannu Amaarri SOBDUU dha. Kan ittiin Jaarraa tokkoof nu bulchaa turtes soba hanqaaquu dhan. Amaaraaf sobanii collummaan nama bira darbuutu waan isaan bara baraan baasu itti fakkaata. DOOFUMMAA Dha! Bara Oromoon dammaqee soba isaanii itti baree kana waan hedduu irratti waan isaan nutu axaarii ykn qaroo dha jedhanii hojjetan isanitti galagalee isaan miidhaa yoona gaheera!
Kan nama gaddisiisus, akka Nigusuu Xilaahunii fi warri Mootummaa Naannoo Amaaraa jedhanitti hamma ijoollee isaanii hunda baafatanitti akka qabsoo (lola jechuu dha) itti fufan Oromoo sodaachisuuf labsani. Oromoon Amaara nii beeka. Amaaara takkaa hin sodaatu.
Dhugaan jiru WBOn guddatee injifannaan olaantummaan Amaaraa bara baraan kan hin abjootamne ta’ee du’a. Kana sodaatanii Amhaarticha Abiy Ahmad waliin mari’atanii Humna Addaa Poolisii Amaaraa Wallaggatti bobbaasanii keessattuu humna Jaal MARROO DIRRIBAA ajaju rukutuuf bobbaasani rukutamanii daaraa ta’a.Duula lolaa Oromoo guutuu irratti labsaniiru jechuu dha.
Kan Oromoon beeku amma illee (1) Jeequmsi Oromiyaa (Finfinnee dabalatee) Amaaraan adeemsifamaa jiruu fi (2) lolli Oromiyaa keessatti deemaa jiruu WEERARA AMHAARAA TI! ABO magaalaa fi Aanaa keessatti cabsuu fi WBO bosonatti cabsuun akeeka isaanii Oromummaa dhabamsiisanii Oromiyaa diiguun olaantummaa Amaaraan bulchuuf akeeka isaan qabanii dha. Amaarri yoo ABO fi WBOn jiraatee itti fufe akeeki isaanii akka bakka hin geenye Oromoo caalaa bareechanii beeku.
Kanaaf, ilmaan Oromoo kan ammaan kanaan irra WBOtti makamee hidhatee loluuf gara WBOtti jiguu fi Gabrummaa Amaarri nu irratti deebisuuf fiigdu cabsuu qaba. Oromootni qabeenya qabdan fi Oromoon dandeettii qabu meeshaa waraanaa fi rasaasa bituu dhaan gara WBOtti daddabarsuu dha.
Oromoon amma dammaqeera. Dammaquu qofti hin gahu. Waan barbaaddu beekta. Xiqqaatu saboota kaan waliin wal qixxummaa olaantummaan abbaa fedhee hin jirre ijaarratanii waliin buluu, didu ammoo Oormiyaa walaba ijaarrachuu dha. Dammaqanii waan fedhan beekuu qofti ammoo gahaa miti. Hidhatanii Humna Waraanaa ta’anii akka ormi mataa Oromoo irra bahuu barbaadu kan meeshaa lolaan fedhii isaa bakkaan gahuuf fiigu cabsuu barbaachisa.
Kanaaf, Hamma Oromoon hooggansa Jaal Marroo fi ajajoota WBO birootiin HUMNA WARAANAA ta’ee diinaan gitutti Oromoon waan qabuun qabeenyaa fi humna namaan WBO gabbisuun kan filmaata biroo hin qabneedha.
← Qophii BARII FINFINNEE galma Miliniyam ykn Barkumee keessattii ABO tin Not ready to lead! Assessing Abiy Ahmed’s administration →